KARIERA ANJOZOROBE : Manao ny fomba rehetra ahafahany miverina any ny zanak’i Masoandro | NewsMada
KARIERA ANJOZOROBE : Manao ny fomba rehetra ahafahany miverina any ny zanak’i Masoandro
Tantara mitohy ary mbola ho ela vao ho vita amin’izao ny raharaha mikasika ny karieran’Anjozorobe. Fantatra fa andeha anio eny Anosy ny raharaha mikasika ny fangatahan’ny zanak’i Masoandro hiverina ao amin’ity kariera ity. Ny fipetrahan’izy ireo tao an-toerana anefa raha tsiahivina dia nisiana fifandonana sy tsy fanarahan-dalana isan-karazany…
Taorian’ireny olana marobe nitranga tany Anjozorobe ireny, olona sasantsasany ao amin’ny fitsarana amin’izao fotoana izao no mitady hamerina ny zanaky ny filoham-pirenena any amin’ny karieran’Anjozorobe. Taorian’ny fampihantonana tamin’ny fomba tsy manara-dalàna ilay didim-pitsarna nivoaka tamin’ny 20 desambra 2016, izay efa nahazahoana fanamarinana tsy fampiakarana intsony (certificat de non recours), mangataka indray izy ireo amin’izao hanaovana ny fitsarana mba ahafana mamerina azy ireo any amin’ity toerana ity. Ny fitsarana ity raharaha ity izay andeha anio maraina eny amin’ny efitrano faha-34 eny amin’ny fitsarana Anosy. Araka ny resaka mandeha, misy amin’izao fotoana izao ny karazana tsindry ataon’izy ireo eny amin’ny fitsarana mba ahazahoany io didy ahafahany miverina any Ankaraoka io.
Mampanahy araka izany ny fitsabahan’ity zanaky ny filoham-pirenena, sy ny olona manodidina azy, amin’ity resaka ity nefa ny olona miady eo anivon’ny fitsarana dia i Andrianarimiadana Alphonse. Ireto solotenan’ny zanak’i Masoandro ireto, raha tsiahivina, dia naman’ilay zandary lavon’ny bala tany an-toerana ny tamin’ny 8 janoary lasa teo. Ity Andrianarimiadana Alphonse ity ihany koa izay tokony mbola ataon’ny zandary fakana am-bavany mikasika iny raharaha nahafaty ilay zandary antsoina hoe Rado iny, amin’ny mahatompon’ny kariera azy, saingy mbola tsy nipoitra izy hatramin’izao. Raha tsiahivina mantsy, tsy hita teny an-toerana intsony izy niaraka tamin’ny namany vitsivitsy ny marainan’ny ampitson’ny nahafaty io zandary io.
Inona no mahamaika ?
Araka ny fantatra, tsy misy miasa any amin’io kariera io amin’izao fotoana izao araka ilay didy nivoaka tamin’ny 20 desambra 2016 izay milaza fa atsahatra sy roahina avokoa ny olona rehetra ao. Mpiandry kariera sisa no mijanona any amin’io toerana io. Io didy io izay mbola voahaja hatreto saingy io niadian’izy ireo mafy sy nandikany ny lalàna niaraka tamin’ny filoha voalohan’ny fitsarana ambony mba ho ampiantoana io.
Amin’izao indray izy ireo mitady ny fomba rehetra ahafahany miditra any. Vao ny arak’endrika fotsiny (forme) anefa io didy nampihantonin’ny fitsarana io saingy mbola tsy voatsara kosa ny tena votoatin’ady (fond) amin’ity raharaha ity.
Mbola vao eny anivon’ny polisim-pirenena kosa ny fanadihadiana mikasika ilay filazana fa hosoka ilay taratasy fampahafantarana didy, mbola tokony andeha ny fitsarana mikasika io raharaha io.
Raha ny fandinihina ny antotan-taratasy mikasika ity kariera ity, nisy ny fifanaraham-piaraha-miasa nifanaovan’Andrianarimiadana Alphonse tamin’i Jean Yrmand saingy notsinotsiniaviny izany amin’izao fotoana izao fa naleony niara-niasa tamin’ireo olona hafa ireo. Azo heverina ho mamofompofona fivadiham-pitokisana araka izany ao anatin’ity raharaha ity. Ny mahamaika an’ireo olona miaraka amin’i Alhponse amin’izao fotoana izao anefa dia ny fangatahana hiverina ao amin’ilay kariera.
Efa nisy rà latsaka
Hatreto, olona roa izay no namoy ny ainy tao amin’ity kariera ity. Ilay zanak’Androy antsoina hoe Mandignisoa no voalohany ary i Rado no faharoa. Rehefa tsy misy miasa tahaka izao anefa ao amin’ity kariera ity dia milamina tsy misy fifandonana tsy misy ady na fifamaliana akory.
Tokony andrasana araka izany ny fandehan’ny fitsarana mikasika ny tena votoatin’ady vao misy olona averina miasa any amin’ity toerana ity. Tokony avela andeha avokoa ireo ady ara-pitsarana rehetra mahavoasaringotra ny olona mifanohitra amin’ity raharaha ity vao misy fanapahan-kevitra mivoaka eo anivon’ny fitsarana amin’izay olona tokony hiasa any an-toerana.